सलमान र ज्याकलीन फेरी सँगै ! « Ramailo छ
सलमान र ज्याकलीन फेरी सँगै !
प्रकाशित मिति : Jun 4, 2017
बलिउड अभिनेता सलमान खान र अभिनेत्री ज्याकलीन फर्नान्डिज फेरी एक फिल्ममा सँगै काम गर्ने भएका छन् । ‘किक’ मा पहिलो पटक संगै काम गरेको यो जोडीले फेरी रेमो डियूजाको नयाँ फिल्ममा काम गर्दैछन् । खबर अनुसार, सलमानले यो फिल्म साइन गरे ज्याकलीन पनि मुख्य भूमिकामा अनुवन्धित हुने लगभग पक्कापक्की भैसकेको छ । रेमो डिसूजाको नयाँ डान्स फिल्ममा सलमान पहिलो पटक एक डान्सरको भूमिकामा देखिनेछन् ।
‘किक’ मा सलमान र ज्याकलीनको जोडीलाई निकै रुचाइएको थियो । सलमान खान अहिले आफ्नो नयाँ फिल्म ‘ट्यूबलाइट’र ‘टाइगर जिन्दा हैं’ को काममा व्यस्त छन् । ‘ट्यूबलाइट’ ईदमा रिलिज हुँदैछ भने ‘टाइगर जिन्दा है’ को अहिले सुटिङ भैरहेको छ । अहिले चर्चा छ कि सलमान रेमोले ज्याकलीनसँग फिल्मको विषयमा कुराकानी गरिसकेका छन् र उनलाई पनि फिल्मको स्क्रिप्ट चित्त बुझेको छ। अहिले ज्याकलीन लन्डनमा आफ्नो नयाँ फिल्म ‘जुड़वा २’ को सुटिङमा व्यस्त छिन् ।